March | 2014 | Oromia & Oromo Affairs
Posted by A. Kenate on March 27, 2014
Posted by A. Kenate on March 17, 2014
Koongirasiin Federaalistii Oromoo (KFO/OFC) kora guyyaa kaleessaa, Bitootessa 7, 2014 magaalaa Shashamanneetti waame milkiidhaan raawwate.
Kora kanarratti uummanni baayyeen hirmaateera. Kora kanarratti KFO irraa 1. Kabajamoo Ob. Bulchaa Dammaqsaa, 2. Barreessaa Dhaabichaa Ob. Baqqala Nagaa, 3. Itti-aanaa Dura Taa’aa Ob. Gabruu Uturaa fi 4. Itti-aanaa Dura Taa’aa Ob. Mulaatuu faan argamanii haasawa baldhaa taasisaniiru. Kora kanarratti sagantaa siyaasa dhaabichaa irratti, mirga Oromoo irratti, filannoo 2015, fi haala siyaasa biyyittii irratti mariin taasifameera.
Miseensonni Koraaf Uummata Wamaa turan gaafa Jimaataa Saatii 6f mgaalaa Arsii Nageelleetti jalaa hidhamuunille ibsameera. Qabsoo uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoon taasisaa jiraniin dimookraasii fi bilisummaa Itoophiyaa keessatti ni fidna dhadannoo jedhuun xumurameera.
Kora Koongirasii Federaalawaa Oromoo (KFO/OFC) magaalaa Shaashamannee
Posted by A. Kenate on March 15, 2014
Dhibamuun Obbo Alamaayyoo maalif hanga ammaa dhokfamee ture
Osoo dhibamanuu maalif hanga ammaa hojirra tursiifaman
Akkaatan miidiyaan biiyaa du’a isaa itti simate maal fakkata
Haala inni itti angorraa buufameefi namni bakka isaa bu’u itti filamurratti seerri maal jedha